प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव। तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ/रासस
काठमाडौं। जनताको दशकौं लामो चाहना र बलिदानीको उपलब्धि स्वरुप स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा सुनौलो इतिहास रच्न सफल डा. रामवरण यादवलाई संविधानसभाबाट तयार नेपालको समावेशी संविधान जारी गर्ने अभूतपूर्व अवसर जुर्‍यो। मधेशी समुदायको सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका उनी पेसाले चिकित्सक हुन्। लोकतन्त्रप्रतिको अविचलित आस्थाका कारण उनी राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय रहे। डा. यादव २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा २४० वर्ष लामो निरङ्‍कुश राजतन्त्र ढलेसँगै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।
मुलुकमा एक राजनीतिक प्रणाली अन्त्य भएको र अर्को स्थापित भई नसकेको अत्यन्त तरल राजनीतिक अवस्थामा भिन्न-भिन्न राजनीतिक आन्दोलन र पृष्ठभूमिका दललाई काखापाखा नगरी अभिभावकत्व प्रदान गर्दै दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराएर सहजरुपमा राजनीतिक अवतरण गराउन उनले खेलेको भूमिकाको सर्वत्र प्रशंसा हुँदै आएको छ।
नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा गरेको अवसरमा पूर्वराष्ट्रपति यादव संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लोकतन्त्रको मर्म र संविधानको भावना बुझेर काम गर्न विधायिका, सरकार र राजनीतिक दललाई सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘असन्तुष्टिका स्वरलाई विधायिकाले सहिष्णु भएर संविधान सम्मतरुपमा कानून बनाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ।’ संविधान दिवस र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको अंशः
संविधान जारी भएको दिन सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक दिन हो। यस दिनमा सबैभन्दा पहिला म नेपाली जनतालाई सम्झन चाहन्छु। जनताको ठूलो संघर्ष र बलिदानकै कारण संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गर्न सफल भएको हो। यस दिन म खासगरी देश र समाजका लागि त्याग र बलिदान गर्ने शहीदहरु, नेपाली जनता तथा यस संघर्षमा संलग्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई स्मरण गर्न चाहन्छु।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने त्यो ऐतिहासिक क्षणलाई स्मरण गर्दा यहाँले विशेषगरी कसलाई स्मरण गर्नुहुन्छ ?
यो संविधान नेपाली जनताको संघर्षको उपज हो। संविधान करिब सात दशक लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि हासिल भएको उपलब्धि हो। नेपाली जनताका प्रतिनिधिले जनताका लागि पहिलोपटक लेखेको संविधान जारी गर्ने अवसर मैले पाएको थिएँ। वि.सं. २००७ देखि २०६२/०६३ सालसम्म भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र राजनीतिक संघर्षको फलस्वरुप हामीले यो संविधान पाएका हौं। तसर्थ म यो दिनमा सबै आन्दोलन र संघर्षमा बलिदान र योगदान गर्ने सबैलाई विशेष स्मरण गर्न चाहन्छु। निश्चय नै २०६२/६३ सालको आन्दोलनका अग्रणी नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा तत्कालीन सात दल र पछि थपिएको अर्को एउटा दलका नेताहरुको संघर्ष, योगदान र त्यागबाट नै यो उपलब्धि हासिल भएकाले यसमा सबैलाई सामूहिक रुपमा स्मरण गर्न चाहन्छु।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्था अहिले कस्तो पाउनुभएको छ? जनताले अपेक्षाअनुसार लाभ प्राप्त गर्न सकेका छन् त ?
यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो। समानुपातिक समावेशीता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत धेरै विषय समेटिएको यो संविधान लचिलो संविधान हो। कार्यान्वयनको चरणमा निश्चय नै यो संविधान आफ्नो ‘लिक’मा छ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधान जारीपछि तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भई अहिले तीनै तहका सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। सबैले आ-आफ्ना स्थानबाट काम गरिरहेका छन्। यो संविधानका प्रावधान कार्यान्वयन गर्दै जाने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र जनप्रनिधिहरुको हो।
संघीय विधायिका र कार्यपालिकाले सबै पक्षको असन्तुष्टिका स्वरलाई सहिष्णु भएर सुन्नुपर्छ। विधायिकामा लगेर छलफल गरी सर्वस्वीकार्य समाधान खोज्न लोकतन्त्रले बाटो देखाउँछ नै। असन्तुष्टिका कुरालाई सम्बोधन गर्न संविधानले ठाउँ दिएको छ। त्यसलाई वार्ताद्वारा हल खोज्ने प्रयत्न हुनुपर्छ। सहिष्णु भएर सबै समस्यालाई सुन्ने, व्यवस्थापिकामा लगेर खुला रुपमा छलफल गर्ने र त्यसको समाधान खोज्ने हो। लोकतन्त्रको विधिमार्फत सबै विवाद मिल्दै जाने अपेक्षा गरेको छु।
संविधानअनुसार तीनै तहका सरकारको भूमिका र सेवा प्रवाहलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? तीन तहका सरकारबीचको आपसी सहयोग र सहकार्यमा तादाम्यता रहेको कतिको पाउनुभएको छ ?
संघीयता कार्यान्वयनमा तालमेल नपुगेको भन्ने प्रश्न बेलाबखत बाहिर आउने गरेको छ। प्रदेश सरकारले संविधानअनुसारको अधिकार प्रयोग पूर्णरुपमा गर्न नपाएको भन्ने गुनासो पनि छ। यसमा यहाँको केही टिप्पणी छ ?
कतिपय घटनालाई अघि सारेर जनादेशको अवमूल्यन गर्ने काम भयो भन्ने चिन्ता व्यक्त भइआएको पाइन्छ। यस्ता क्रियाकलापले संविधानले आत्मसात गरेको संघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्न पक्कै बल पुग्दैन होला। यस विषयमा यहाँको दृष्टिकोण के छ ?
यहाँको कार्यकालमा शुरु भएको राष्ट्रपति तराई-मधेस चुरे संरक्षण कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य र कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाप्रति यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मुलुकमा समाजको जस्तै भूगोलको पनि विविधता छ। संसारमा चरमरुपमा प्रकृतिको दोहन भएको छ जसका कारण जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभर देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्पन्न विषालु जीवाणुबाट कोभिड-१९ जस्ता महामारीको समस्या आएको छ र त्यसको संक्रमणबाट ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने स्थिति देखापर्दैछ। चुरे क्षेत्रमा वन, बोटबिरुवा, वनस्पति, जीवजन्तु, पशुपन्छी, खोलानाला, पानीका स्रोत प्रकृतिले दिएको छ। त्यो क्षेत्रको जल, जंगल र जडीबूटी जोगाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। चुरे जैविक विविधताको धनी क्षेत्र हो, त्यसले तराईलाई धनधान्य बनाएको थियो। पहिले चुरेमा ठूलो जंगल थियो, जसका कारण तराईमा कृषि, पशुपालन, बालीनाली र फलफूलको उब्जनी राम्रो ढंगबाट हुन्थ्यो, त्यो अवस्था अहिले रहेन। मरुभूमिमा परिणत हुने अवस्था देखिँदै छ, अहिले त्यहाँ।
(प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग राससका नारायण न्यौपाने र भीष्मराज ओझाले गरेको कुराकानी)